ITB Berlin: UNWTO na-ekwu mba, ICTP na-ekwu ee na nchedo ụmụaka site na njem
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » ITB Berlin: UNWTO na-ekwu mba, ICTP na-ekwu ee na nchedo ụmụaka site na njem
Inweta njem nleta • Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Education • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • ndị mmadụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Mmegbu ụmụaka site na njem nlegharị anya, ịzụ ahịa ụmụ mmadụ n'ihi njem nleta - ihe ndị a bụ ihe dị mwute na ụlọ ọrụ ndị ọbịa taa. Ndị na-eduzi ndị na-ahụ maka ụgbọelu na ile ọbịa na-etinye nrụsi ike dị ukwuu n'inye ọzụzụ na mmata maka akụkụ njem a. Interpol na ndị uwe ojii mba dị ka Scotland Yard, FBI, na ndị uwe ojii Royal Dutch bụ naanị ụfọdụ ndị na-akwado ọrụ ma dị njikere ịga nzukọ ụwa niile dịka nzukọ UNWTO kwa afọ maka Nchedo ụmụaka n'oge ngosi njem njem ITB na Berlin.
N'ime afọ 20 gara aga tinyere afọ, yearstù Na-ahụ Maka Njem Ọchịchị Mba Ndị Dị n'Otu (UNWTO) nọ na-enye ọ bụghị naanị ndị otu Kọmitii Executive ha maka nchekwa ụmụaka kamakwa otu ndị chọrọ igosipụta mmemme, nsogbu, na omume kacha mma na mmemme ọha na eze. n'oge ahia ahia ITB kwa afọ na-egosi na Berlin, Germany. Nzuko nke abụọ na World Travel Market (WTM) na London kagburu UNWTO n'ihi nsogbu mmefu ego ọtụtụ afọ gara aga.
Onye odeakwụkwọ ukwu UNWTO n'oge gara aga Taleb Rifai emeela ka nchedo ụmụaka bụrụ ihe kacha mkpa mgbe ọ na-edu ndị ọrụ UN ruo na njedebe nke afọ gara aga. Mgbe onye ọdee akwụkwọ ọhụrụ UNWTO bụ Zurab Pololikashvili weghaara ụlọ ọrụ UN pụrụ iche na 2018, ndị otu Kọmitii Executive jidere ha na mberede mgbe UNWTO Secretariat gwara ha naanị otu ọnwa tupu ITB na kagburu nzukọ ha. E nyeghị ihe kpatara ya. eTN kwughachiri UNWTO ka ịchọta ihe ndị ọzọ. Arịrịọ a zutere na ịgbachi nkịtị.
N'ime mgbalị nkwụsị ikpeazụ, ndị Njikọ Mba Nile nke Ndị Njem Nlegharị Anya (ICTP), n’okpuru nduzi nke Onye isi oche ha Juergen Steinmetz, onye bụkwa onye otu UNWTO Executive Committee maka nchedo ụmụaka, haziri nzukọ na-abụghị nke gọọmentị na mmeghe nke ndị nwere oke UNWTO, ndị otu ICTP, na onye ọ bụla nwere mmasị na nchekwa ụmụaka na njem. Onye isi oche nke Nepal Tourism Board bụ Deepak Raj Jos egbughị oge ọ bụla wee meghee nguzo ya maka nzukọ a.
“Ọ bụ ihe nwute na UNWTO kwụsịrị mmemme ahụ. Anyị na-akwado ma na-agbasi mbọ ike maka atụmatụ ICTP, ““ O zuru ezu maka mmetọ ụmụaka site na njem nleta, anyị na-akwado atụmatụ ahụ site na ICTP ma hụkwa mmegharị ahụ anya, ”bụ azịza ndị a na-ahụkarị nke ọtụtụ ndị nnọchiteanya 28 debanyere aha ugbu a.
Dorothy Rozga, Executive Director nke ECPAT International, dere, sị: “Anaghị m eme atụmatụ ịbịa ITB n’afọ a. Otú ọ dị, dị ka nzaghachi maka ebumnuche gị magburu onwe ya ma nwee ekele, aga m aga ebe ahụ maka nzukọ a. ”
Ruo ugbu a, ICTP natara aha 28 site na Thailand, India, UK, Belgium, Netherlands, Zimbabwe, Germany, Pakistan, Guinea Bissau, USA, Serbia, Nepal, na South Africa.
Ndị nnọchi anya ECPAT, THE CODE, WYSE, ABTA, WSO, na Ministry of Tourism and Sports Thailand, yana International Delphic Council na-eme atụmatụ ịbịa. ICTP kpọrọ Secretary General UNWTO Zurab Pololikashvili, mana rue mgbe UNWTO azaghị.
A na-akpọ onye ọ bụla na-aga ITB Berlin izu na-abịa ka o sonye. Ndebanye aha: http://ictp.travel/itb2018/
MGBE OLE? Fraịdee, Machị 9, 2018: 11.15 h
EKWERE? ITB Berlin, Guzosie 5.2a / 116 (Kọmitii njem nlegharị anya nke Nepal)
WHO? Ndị otu ICTP, ndị isi njem njem njem njem ụwa na ndị njem, mkpakọrịta na mgbasa ozi
Deba aha: pịa ebe a
Steinmetz, onye bụkwa onye mbipụta akwụkwọ nke eTurboNews, kwuru, sị: “Nchedo ụmụaka dị oke mkpa ka eleghara ya anya na mmemme ụlọ ọrụ njem kachasị ukwuu n'ụwa. Obi dị m ụtọ ịhụ ụlọ ọrụ na mba dị iche iche na-egosi idu ndú. Anyị na-emeghe onye ọ bụla chọrọ inye aka na nzukọ anyị. Anyị na-akpọ onye ọ bụla chọrọ ịmatakwu otu esi etinye aka. Anyị na-atụ anya na UNWTO, WTTC, na PATA ga-atụle isonyere anyị. Anyị kpọrọ Secretary General UNWTO Zurab Pololikashvili ka ọ sonyere anyị, mana ruo ugbu a, ọ nweghị nzaghachi a natara. Debanye aha na http://ictp.travel/itb2018/ ma hụ gị na Berlin. ”